ကွန်ပျူတာမှာ အသုံးပြုရန်....CyberLink YouCam4| အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် CyberLink YouCam4.လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!
တစ်ချို့စက်တွေမှာ WebCam လေးတွေက အဖတ်မပါဘူး....!ဒါကြောင့် လိုချင်တဲ့ သူတွေရှိရင် အဆင်ပြေအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...!ဒီကောင်လေးက ကင်မရာအဖတ်လေးတွေလည်း တော်တော်ဆုံပါတယ်...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း အရမ်းမကြီးပါဘူး 155.47 MB ပဲရှိပါတယ်...!Full Version လေးသုံးလို့ရအောင်လို့ ကျွန်တော် Keygen..လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်...Email...လိပ်စာကတော့ ကိုသုံးနေတဲ့ လိပ်စာထည့်ပေးပါ...!ဒါမှ Update...လုပ်ခိုင်းရင် ...!သိအောင်လို့ပါ...!ဘာမှ စိုးရိမ်စရာ မလိုပါဘူးထညိ့ပေးလိုက်ပါ....!
လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့် တင်ပေးထားတယ် ယူသွားပါ...!
သိပြီးသားသူငယ်ချင်း တွေအတွက်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်....!
No Response to "ကွန်ပျူတာမှာ အသုံးပြုရန်....CyberLink YouCam 4"